China Model Kwete: Chinese Gadzira Q91Y Series Hydraulic chinyorwa simbi rinorema basa shear muchina fekitori uye vanotengesa | Unite Top
Model No: Chinese gadzira Q91Y Series Hydraulic chinyorwa simbi rinorema basa sheari muchina
Q91Y akateedzana hydraulic Heavy basa chinyorwa simbi shear muchina, inogona kuveura dzakasiyana mabara uye maprofiles, hombe yakawanda yezvimedu simbi yakamanikidzwa pamwechete, kuita refu block, mwenje simbi chinyorwa chakaiswa mubhokisi, tsvina mota yakabuditsirwa mumota yekudhinda block . Kuwedzera kune yekuveura basa.
Kupfuurisa 25+ makore ekuziva ruzivo, ichipa yakagadziriswa kupfuura 3000+ inogadzira marara esimbi marongero echirongwa.
Nzvimbo yeKutangira JIANGYIN, CHINA
Muenzaniso Q91Y Series
Max Kucheka Simba 250-1250Tani
Nereza kureba 1600-2000mm
Kushanda Otomatiki kuzvidzora
Yedu Q91Y akateedzana hydraulic rinorema basa chinyorwa checheura muchina unoshandiswa zvakanyanya mumhando dzese dzesimbi tsvina simbi, marara anorema, mwenje uye nhete tsvina simbi, chinyorwa mota goko, simbi yakagadzirwa nesimbi simbi chimiro hombe, chimiro, kugadzirwa uye hupenyu hupenyu simbi, ese marudzi epurasitiki asiri-simbi simbi (simbi isina chinhu, aruminiyamu chiwanikwa, mhangura, nezvimwewo) kumanikidza kurongedza uye kuveura kuzadzisa zvinoshanda maratidziro emutero, Q91Y akateedzana hydraulic rinorema basa chinyorwa simbi shear muchina chinhu chakakodzera michina yesimbi zvigayo, indferrous simbi yekunyungudutsa indasitiri, indasitiri yecheni uye vagadziri vezvinhu zvisina kugadzirwa.
Q91Y hydraulic inorema tsvina yekuveura muchina zvakare ine iyo yekuwedzera basa, iyo inogona kuburitsa yakati wandei isina kujairika diki simbi simbi mubhokisi rezvinhu rekuveura, mushure mekuburitsa uye kuveura kwesimbi yakaputsika simbi, pamusoro pengura dura uye zvimwe zvinhu zvinokuvadza zvinogona kuve zvishoma zvakasvuurwa, zvichivandudza kuchena kwesimbi yakasara. Iyo inogona kushandiswa kuveura inorema marara ehukuru hwakasiyana. Q91Y akateedzana hydraulic rinorema basa chinyorwa checheura muchina unogona kutsiva zvachose murazvo kucheka. Izvo zvakachengeteka uye zvinoshanda kufudza nesimbi inobata muchina kana forklift rori.
● Q91Y akateedzana hydraulic Heavy basa chinyorwa simbi shear muchina inotora simbi simbi yakasanganiswa simbi yekuchinjisa chimiro, muchina une kukwirira kuomarara, zvikamu zvekuwisira neyakagadzirwa yekukwegura annealing kurapwa, kubvisa kushushikana kwekusimbisa, muchina kunyatsoita zvakanaka, kugadzikana.
● Chipande chakagadzirwa nesimbi yekucheka chine hupenyu hurefu nekusimba.
● Kuchenesa kwejasi kunochinjika, izvo zvinovandudza kushanda kwakaringana kwemushini chishandiso uye nehupenyu hwebasa reza.
● Iyo huru furemu yebhokisi rezvinhu rakagadzirwa nesimbi yakarongedzwa simbi, uye remukati bhokisi remadziro rakagadzirwa neNM500 ndiro yesimbi ine Ultra-yakakwira yekupfeka kuramba, iyo inotaura nezvekupfeka kuramba kwebhokisi rezvinhu. Kufambisa kwemusoro wekusunda weiyo bhokisi bhokisi kunotungamirwa neyakaimiririra hydraulic system, kuburikidza neiyo hydraulic mota uye ngetani. Hukuru hwekusundira zvinhu zvinongoerekana zvadzorwa mushe, uye zvine hunhu hwepamusoro uye hwakavimbika unodzivirira-kuwanda kudzivirira.
● Hydraulic system ine kodzero yakazvimirira yezvivakwa uye yakasununguka dhizaini. Huru sheari humburumbira inotora iyo kusiyanisa wedunhu kupa yakazara mutambo kune kushanda kweiyo kinetic simba system. Iyo yakazara hydraulic system inoenderana uye kurongeka kwepombi kunonzwisisika, izvo zvinoderedza mashandisirwo e hydraulic pombi majoini nemagokora, nokudaro ichideredza iyo yekupisa chinhu yeiyo hydraulic system uye nekunyatso kuona iko kwakajairika uye kwakavimbika mashandiro eiyo hydraulic system.
● Iyo tangi yemafuta dhizaini, inonzwisisika vhoriyamu, yakasimba dhizaini, oiri yekudzoka chiteshi uye oiri suction chiteshi inoparadzaniswa nechikamu, zvinonyatso kudzora kupisa kwe hydraulic mafuta.
●Q91Y akateedzana hydraulic rinorema basa chinyorwa simbi shear muchina shandisa iyo yekumanikidza yekumanikidza uye kumanikidza kwemativi ese echimedu chakabatana uye chakakamurwa nzira yekudyisa, dhizaini yeakakura zvinhu bhokisi, saka iko kushanda kwezvimedu zvakasvibirira zvinhu zvakanaka, kukwirira kwakanyanya mushure meveura.
● Nzvimbo yekuvhura yebhokisi rezvinhu rakakura, inokodzera michina yekushandisa, yakasviba marara, mwenje uye mutete simbi chinyorwa, mota goko, hombe irregular mwenje simbi simbi, simbi pombi, simbi ndiro, chiteshi simbi, I simbi, simbi bhaa uye mamwe mapera ekuveura, ari nyore mubhokisi rezvinhu, anokudza zvizere chiyero chekushandisa kwemidziyo.
● PLC otomatiki kudzora inobata skrini yekudzora pani otomatiki akabatanidza kutonga, uye akawanda-marefu yakazara-maitiro ekuongorora system, iri nyore kune vashandisi kudzora uye yakazara-maitiro ekutevera mashandisirwo emidziyo mashandisirwo. Yakagadzikana uye yakavimbika mashandiro, inosarudzika isina waya kure kudzora mudziyo, imwechete opareta yekugadzira tambo inotsigira michina.
● Q91Y akateedzana hydraulic rinorema basa chinyorwa simbi shear muchina shandisa yakavimbika yakakura kuyerera logic vharuvhu yekudzora, yakazvimiririra kusefa uye kutonhora sisitimu, inogona kuve nechokwadi sisitimu inoshanda uye yakagadzikana kushanda. Iko kushanda kwakazara kwesimba rinogara richishanduka uye kusiyanisa tekinoroji inokurumidza kunogona kuchengetedza ingangoita 30% apo ichisimbisa kuburitsa, uye simba rekushandisa patani yezvimedu simbi yekugadzirisa yakaderera pane indasitiri yakajairwa zvinodiwa.
Max Kucheka Simba (Ton)
Saizi yekumusoro (mm)
Nereza Length (mm)
Shearing Frequency （nguva / min）
Yedu Q91Y akateedzana hydraulic rinorema basa chinyorwa shear machin inopa tsika yakakurumbira mhando muchina zvikamu, isu tanga tichishanda pamwe nevakawanda-vanozivikanwa pasi rese brand mutengesi, seSIMEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI uye zvichingodaro kweanopfuura makore gumi
Iyo shoma modhi Q91Y hydraulic rinorema basa chinyorwa simbi shear muchina inogona kudzivirirwa mushe mune imwe 40 HQ mudziyo. Kana chikepe nechikepe, isu tichavhara poncho uye Load deck kuchengetedza yedu Q91Y hydraulic rinorema basa chinyorwa simbi shear muchina.
Tarisa Q91Y akateedzana Hydraulic rinorema basa chinyorwa simbi yekucheura Mushini wekucheka Simbi mukuita!
Pashure: Muenzaniso Nha: Chinese Gadzira Chinyorwa Kudzora Q43 Series Hydraulic Scrap Metal Alligator Shear Machine
Zvadaro: Muenzaniso Nha: Chinese Inogadzira otomatiki Kudzora Y83 Series Hydraulic Metal Chip Briquetting Press Machine yeMetron Recycling
Alligator Sheari Machine
Hc43-1600 Alligator Sheari Muchina
Hydraulic Alligator Chidimbu Sheari Machine
Sheet Metal Baler, Metal Poda Briquette Muchina, Horizontal Baler Aluminium Chidimbu Press Machine, Alligator Sheari Yenhare Digger, Hydraulic Baler / Aluminium Inogona Dhinda Muchina, Mhangura Chakagadzirwa Baler,